Wararka – Page 5 – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Madaxweyne Farmaajo oo Shacabka Ugu Hambalyeeyay Ciida Soonqaad
Ciidamadda Kenya oo Duqeyn Ku Dilay Hooyo iyo Laba Caruur ay Dhashay
Wararka ka imaanaya Gobolka Gedo ee Koonfurta dalka Soomaaliya ayaa ku waramaya in Ciidamadda kenya ee qeybta ka ah howlgalka AMISOM ay duqeyn ka fuliyeen halkaas. Duqeynta ayaa ka dhacday deegaano u dhaxeeya Ceel-waaq iyo Baardheere ee Gobolka Gedo oo lagu magacaabo Cows-qurun. Dadka deegaanka ayaa idaacadda Simba ee Magaaladda muqdisho u sheegay in duqeynta ay fuliyeen diyaaradaha Dowladda Kenya,islamarkaana ...
DFS oo Sheegtay in 24-saac ee La Soo Dhaafey Covid-19 Laga Heley 39-Ruux
Wasiirka Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada XFS, Marwo Fowziya Abiikar Nuur ayaa warbixinta maalinlaha ah ee COVID19 ku xaqiijisay in 24-kii saac ee ugu dambeeyay ay xanuunka Karoona ka bogsooseen 11 qofood. Bukaannada jirkooda laga waayay Feyruska ayaa tirada guud ee dadka bogsooday ka dhigaya 163 oo ka dhigan inay xanuunka ka reysteen in ka badan 11% dadkii uu xanuunku haleelay. ...
Dhageystayaal kusoo Dhawaada Warka Subax Radio Simba ee Magaaladda Muqdisho waana Subaxnimo Talaado ah Tariikhdana ay Ku beegan tahay 19/10/2020
Al-shabaab oo Bilaabay Qorshe ay Ku Beegsanayaan Gudoomiyayaasha+Dhageyso
Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Maamulka Puntland ayaa loogu baaqay inay la yimaadaan isbedel ku aadan weeraradda Gaadmada ah ee lagu beegsanayo Mas’uuliyiinta Maamulada Gobalada ka dib Dilkii Gudoomiyihii Mudug ee Puntland Axmed Muuse Nuur. Dilalka qaraxyada loo adeegsaday ee lala beegsaday Gudoomiyaashii Gobalada Baanaadir,Nugaal iyo Mudug ayaa la sheegay inay daboolka ka qaadeen in Alshabaab ay bartilmaameedyo ku hayaan Mas’uuliyiinta ...
Waare oo Lagu Eedeeyay In uu Lunsaday Lacagihii gurmadka Beledweyne+Dhageyso
Madaxweynaha Maamulka Hir-shabeelle Dr Maxamed Cabdi Waare ayaa lagu eedeeyay in uu lunsaday lacago loogu talagalay gurmadka Magaaladda Beledweyne oo saameeyn ku yeeshay fatahaada uu sameeyay Wabiga shabeele. Maareeyaha Garoonka Diyaaaradaha Baldweeyne Qaasim Maxamed Maalin oo la hadlay idaacada Simba ee magaaladda muqdisho ayaa sheegay in Lacagihii ay balanqaadeen Dowladaha Soomaaliya iyo Jabuuti ay soo gaareen Maamulka Hir-shabeelle balse uu ...
Dowlada Soomaaliya oo Sheegtay in Duqeyn lagu Dilay Xubno Shabaab ahaa
Ciidanka Kumaandooska Soomaaliya oo kaashanaysa Ciidamada Africom ee Mareykanka ayaa howlgal lagu dilay xubno ka tirsan AL-shabaab ku fuliyay gobolka Shabeelada Hoose. Howlgalkaasi oo ahaa duqeyn dhanka cirka ah ayaa lala beegsaday nawaaxiga magaalada Kuunyo Barrow, Duqeyntaas oo lagu dilay 2 (labo) ka tirsan argagaxisada Alshabaab. howlgalkan ayaa ka qeyb ka ah qorshe Dowladda Federaalka Soomaaliya, Midowga Afrika iyo isbahaysiga ...
Madaxweyne Muuse Biixi oo Sharuud Ku Xiray Wada-hadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya
Madaxweynaha Maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sharuud ku xiray wada-hadalka Soomaaliland iyo Dowladda Dhexe ee Soomaaliya. Isagoo maanta ka hadlayay, munaasabadda 18-may ayuu sheegay in aysan marnaba la hadli doonin Dowladda Dhexe ee Soomaaliya. Waxa uu sheegay in Dowladda Dhexe ee Soomaaliya aysan ixtiraamin Qarannimadaasi lala kala noqday. “Halkii ay ahayd in la isku ixtiraamo Qarannimadaasi lala kala noqday, ...
Dhageystayaal kusoo Dhawaada Warka Duhur Radio Simba ee Magaaladda Muqdisho waana Duhurnimo Isniin ah Tariikhdana ay Ku beegan tahay 18/10/2020
Qadar oo Ka Hadashay Qaraxii Ka Dhacay Magaaladda Gaalkacyo
Dowladda Qatar ayaa kahadashay qarax ismiidaamin ah oo shalay kadhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobalka mudug qaraxaasi oo lagu dilay masuuliyiin katirsan maamulka gobalka mudug ee dowlad gobaleedka puntland. Qoraal kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dalka Qatar ayaa waxaa si kulul loogu cambaareeeyay qaraxii shalayto lagu dilay gudoomiyihii gobalka mudug ee dowlad gobaleedka puntland iyo qaar kamid ah ilaaladiisa kuwaasi ...
MW Deni:-“Beesha Caalamka iyo Dowladda Dhexe Midna Kama Helin Taageero”,!
Madaxweynaha Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa caawa ka hadlay Amniga Guud ee Puntland, Qorsheeyaasha dhinaca Amniga ee socda, wuxuuna ka tacsiyeeyay geerida alle ha u naxariistee Guddoomiyihii Gobolka Mudug Axmed Muuse Nuur oo Shabaab ay ku dileen Gaalkacayo. Madaxweyne Deni ayaa ugu horeyn ka tacsiyeeyay geerida Guddoomiyihii Gobolka Mudug, isagoo sheegay in falkaasi uusan niyadjab iyo baaqsasho ku keenayn ...
Page 5 of 2,075« First...«34567	»	102030...Last »